Mariela Carril | | ဖင်လန်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုးတက်မှုသည်မြောက်ဥရောပနိုင်ငံများအတွက်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်၎င်းတို့သည်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒီမိုကရေစီနှင့်အခွင့်အရေးမျှတသောလူ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်လာရန်မည်သူမျှမငြင်းနိုင်ပါ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် ဖင်လန်.
အကယ်၍ ၎င်းသည် ၂၀ ရာစု၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၁ ရာစု၌ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားခဲ့သည့်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဤနိုင်ငံများဖြစ်လာသည်ဟုဆိုရမည်။ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လူကြိုက်များခရီးသွားနေရာများ။ စာအုပ်များ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများသည်ဤကျော်ကြားမှုကိုတိုးပွားစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့သင်သည်သင်၏အလှည့်သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည် ဖင်လန်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်.
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ တိုင်းပြည်လေးခုသို့ခွဲဝေ ပြီးတော့ငါတို့အားလုံးဒါမှမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးသွားချင်လားဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါ။ ဤဒေသများမှာ ဟယ်လ်စင်ကီ၊ ကန်,ရိယာ၊ လတ်လန်နှင့်ကမ်းရိုးတန်းareaရိယာ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့နှင့်အတူစတင်သွားကြသည် ဟယ်လ်စင်ကီ၊
ဒါဟာအစဖြစ်ပါတယ် တိုင်းပြည်တွင်အကြီးဆုံးမြို့ လူ ဦး ရေ ၁.၄ သန်းနေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းသည်ဥရောပမြောက်ဘက်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် ကျွန်း ၃၀၀ ဝန်းကျင်ရှိကျွန်းစု အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည့်လေယာဉ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လှေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၎င်းသည် Baltic Sea တွင်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ဤအရပ်မှသေးငယ်တဲ့မြို့များနှင့်ကျေးရွာများနှင့်အမျိုးသားဥယျာဉ်များသို့ဖင်လန်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအခြားနည်းနည်းခရီးစဉ်များကိုသင်စီစဉ်နိုင်သည်။
မြို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သည်အလွန်ထိရောက်သည် နှင့်သင်မက်ထရို၊ ဘတ်စ်ကားနှင့်လမ်းရထားများနှင့်ကူးတို့အသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ခရီးများကိုဖုံးသောနေ့စဉ်လက်မှတ်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ လေဆိပ်ကနေမြို့လယ်ခေါင်အထိနာရီဝက်သာရှိတယ်၊ ပြီးတော့မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ်အများပြည်သူစက်ဘီး sarအဝါရောင်သို့မဟုတ်ကျွန်းငယ်သို့သွားရန်ကူးတို့ယူပါ။ ထို့နောက် ဟယ်လ်စင်ကီကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလည်ပတ်နိုင်မလဲ သူတို့ရဲ့အသင်းတော်များ ဟယ်လ်စင်ကီဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အ Uspenski ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, အ Temppeliaukio ဘုရားကျောင်း သို့မဟုတ် တိတ်ဆိတ်၏ Kampi Chapel.
အပေါ် ပြတိုက် အဲဒီမှာ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာနှင့်ဗိသုကာ၏ Kiasmaအဆိုပါ အနုပညာပြတိုက်အဆိုပါ ဒီဇိုင်းပြတိုက်နှင့်ဖင်လန်အမျိုးသားပြတိုက်။ သင်တစ် ဦး အလည်အပတ် add နိုင်ပါတယ် အော်ပရာရုံ နှင့်ဒေသတွင်းတွင်ကျင်းပသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့်ဆောင်းရာသီအလယ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ဂျက်ဇ်ပွဲတော်များတွင်သင်ပါ ၀ င်ရန်ကံကောင်းသည်ဆိုပါက။ ဒါလုပ်နေတာအကြောင်းပါ စျေးဝယ် အဲဒီမှာ Toriquarters အထူးခရိုင် စာအုပ်ဆိုင်, ရှေးဟောင်းအိမ်များနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူ။
နွေရာသီ (သို့) နွေရာသီမှာပိုကောင်းတဲ့အချိန်တွေသွားရင်လမ်းလျှောက်တာ၊ နေပူထဲမှာလမ်းလျှောက်တာကိုလုပ်သင့်တယ်။ အများအပြားကမ်းရိုးတန်းနေရာများနှင့်ရှိပါတယ် လှပသောကျွန်းများထိုသို့သောအဖြစ် Lonna, Vallisaari သို့မဟုတ် Suomenlinna သောကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်။ ကူးတို့များသည် Market Square မှ ထွက်၍ ၁၀ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်သာကြာသည်။ ညအချိန်တွင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အများပြည်သူသုံးချွေးပေါင်းအိမ် နောက်ကျသောသူကို၎င်း၊
အပေါ်ကပြောခဲ့တာက ဟယ်လ်စင်ကီမှခရီးစဉ်ငယ်များသင်ပြုလုပ်နိုင်သည် နှင့်အမှန်တရားအချို့ကိုလက်လွတ်မပေးသင့်ပါတယ် ကျေးလက်ကျေးရွာများ ရှစ်ရှိတယ် ၁၇ ရာစုကျေးရွာများ သမိုင်းကြောင်းအရကြွယ်ဝသောအနောက်တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ယနေ့လက်မှုပညာရှင်များနေထိုင်သော Fiskars, Strömfors, Billnäs, Mathildedal, Teijo, Leineperi, Verlay နှင့် Noormarkku ၏စက်မှုဇုန်။
တိုင်းပြည်၏ဒုတိယareaရိယာ လည်ပတ်ရေကန်isရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံတွင်ရေကန်ပေါင်း ၁၈၈၀၀၀ ၀ န်းကျင်နှင့်ကျွန်းပေါင်း ၁၈၀,၀၀၀ ခန့်ရှိပြီးအများစုမှာဤဒေသတွင်ရှိပြီးဥရောပတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ မြစ်များ၊ တူးမြောင်းများ၊ ရေကန်များ၊။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာခရီးသွားအေဂျင်စီတစ်ခုမှအထုပ်တစ်ထုပ်ငှားရန်ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုမှာကားငှားရန်နှင့်ဖင်လန်နိုင်ငံ၏လမ်းများသည်သေဆုံးသူများမရှိဟူသောအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ဖြစ်သည်။
သင်အခြေခံအားဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည် ကန်inရိယာ၌ခရီးစဉ်လေးမျိုး။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းများကိုအေဂျင်စီများကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသဖြင့်သင်အားလုံးသည်မြို့အားလုံးတွင်သင့်အားတူညီသောကမ်းလှမ်းမှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အဲဒီမှာ ယဉ်ကျေးမှုကိုနှစ်သက်သူများ, ယဉ်ကျေးမှုချစ်သူများအတွက်လမ်းကြောင်းကီလိုမီတာ ၁၃၀၀ ရှည်လျားသော Kouvola၊ Mikkeli, Savonlinna နှင့်အခြားဒေသများကိုဖြတ်သန်း။ Olavinlinna Castle ကဲ့သို့သောအလယ်ခေတ်နေရာများကိုဖြတ်သန်းသည်။
အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလည်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းဤလမ်းကြောင်းကိုကားဖြင့်သို့မဟုတ်စက်ဘီးဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းမှာ Sauna Lovers ဖြစ်သည်နောက်တစ်ခုက မိသားစုလမ်းကြောင်း အပန်းဖြေဥယျာဉ်၊ စခန်းများ၊ ဟိုတယ်များပါဝင်သည် မိသားစုဖော်ရွေ, တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်တက်ကြွလေ့လာရေးခရီး။ နောက်ဆုံးတော့အဲဒီမှာရှိတယ် သဘာဝကချစ်သူများများအတွက်လမ်းကြောင်း တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်တောင်ယာခြံတစ်ခုပေါ်တွင်အိပ်စက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
မင်းရဲ့စက်ဘီးကိုအရမ်းကြိုက်သလား စက်ဘီးခရီးစဉ် ကောင်းလိုက်တာ? ပြီးရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ် တူရကီကျွန်းစုလမ်းကြောင်းအထူးသဖြင့်နွေရာသီတွင်မေလမှစက်တင်ဘာလအထိကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်ရေပန်းစားသောမြို့ပတ်ရထားလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ စက်ဘီးတွေ၊ ကားတွေ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေရှိပြီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းထက်ပိုပြီးကူးတို့ကူးတွေပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်။ ဖြစ်လိမ့်မည် ရုံကီလိုမီတာ 200 ကျော်.
ကျနော်တို့ထို့နောက်ရောက်ရှိခဲ့သည် Lapland, မှော်ပြည်, 24 နာရီကောင်းကင်ပြာနေရောင်ခြည်နှင့်လှပသော မြောက်ပိုင်းအလင်းများ။ ဆောင်းရာသီတွင်မြေဖြူသည်၊ ခွေးစီးလာသောစီးနင်းခြင်းသို့မဟုတ်အောက်တိုဘာလတွင်စတင်သောနှင်းလျှောစီးရာသီနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်သစ်ရွက်အားလုံးသည်အနီရောင်နှင့်နီလာကြပြီးယင်းကို "ruska" ဟုခေါ်ပြီးစက်တင်ဘာလလယ်တွင်ကြည့်ရှုရန်လှပသောကာလဖြစ်သည်။
Lapland တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် အမျိုးသားဥယျာဉ်များသို့လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ Lapland၊ ဆွီဒင်နှင့်နော်ဝေးမှလူများ၊ ဖင်လန် Lapland ၏မြို့တော် Rovaniemi တွင်အရက်ဆိုင်ကိုသွား နှင့် Santa Claus ၏နာမည်ကြီးနေအိမ်။
နောက်ဆုံးတော့အဲဒီမှာရှိတယ် ဖင်လန်၏ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေရောင်တွေအများကြီးထွန်းလင်းဘယ်မှာ။ ဒီမှာအများကြီး ပါရှေးဟောင်းရွာများချစ်တယ် သစ်သားအိမ်များ နေဆဲရပ်နေ: Turku, Naantali, Louhisaari, Hiuntie, Lyökintie, Rauma, Vuojoki, Laitakari, Reposaari ကားတစ်စီးငှားပြီးကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဖင်လန်နိုင်ငံသည်ကောင်းမွန်သောခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သွားမည့်အရာကိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ခရီးသွားသည့်နှစ်၏အချိန်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။ ဆောင်းရာသီကလှတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကန့်သတ်ထားတယ်။ နွေရာသီဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကပိုရှည်တဲ့နေ့တွေနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » ဖင်လန် » ဖင်လန်၌ခရီးသွားလုပ်ငန်း